एलईडी दीपक प्रत्येक पारित वर्ष संग लोकप्रियता प्राप्त छन्। तिनीहरूले आर्थिक हो, फरक कम लागत, उत्कृष्ट गुणस्तर र लामो जीवन हो। तर एलईडी प्रकाश उपकरणहरू को विकल्प धेरै ध्यान दिएर नजिक हुनुपर्छ। विशेष गरी, विशेषज्ञहरु प्रकाश फिक्स्चर को सुरक्षा तिर्न ध्यान सुझाव दिन्छौं।
सुरक्षा को सबै भन्दा साधारण कक्षाहरू
IP20 - दीपक, सुक्खा uncontaminated परिसर लागि उपयुक्त, जो उदाहरण कार्यालय, घरहरू, फ्लैट्स लागि।
IP21, 22, 23 - प्रकाश, जो unheated औद्योगिक हल र प्राविधिक कोठा मा स्थापित गर्न सकिन्छ।
IP43, 44 - सानो सुरक्षा र एक सानो माटो र सघन चिस्यान सामना गर्न सक्छन् कि उपकरणहरू। यसलाई प्राय औद्योगिक भवन र सडकहरू लागि प्रयोग गरिन्छ।
IP50 - प्रकाश स्रोतहरू र पूर्ण दूषण सुरक्षित। तिनीहरूले सफा गर्न सजिलो हुन्छ। तिनीहरूले ठोस विरुद्ध सुरक्षा छ। भाँचिएको बल्ब को Shards कोठा मा भित्र पस्नु छैन, र luminaire भित्र रहनेछ। तिनीहरूले खाद्य उद्योग मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
IP54 - दीपक उत्कृष्ट चिस्यान प्रतिरोध भइरहेको एलईडी पर्खाल। तपाईं उच्च हावा चिस्यान संग शेड, औद्योगिक परिसर सेट गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
IP60 - धूलो विरुद्ध सुरक्षा को एक उच्च डिग्री छ जो एक उपकरण। धूलो एक ठूलो रिलीज संग औद्योगिक हल र कार्यशालाओं प्रयोग गरिएको। दुर्लभ, अक्सर IP65 बदलिएको। यस्तो सुरक्षा संग एलईडी दीपक धूल वातावरण र उच्च आर्द्रता वातावरणमा र सेट गरिएको छ। यो सबै भन्दा राम्रो को एक मानिन्छ।
एलईडी दीपक IP65 बिल सुरक्षाको उच्चतम स्तर छ। यी प्रकाश फिक्स्चर ड्राई अपार्टमेन्ट र कार्यालय को लागि आदर्श र दूषित औद्योगिक हल वा आउटडोर स्थापनाका लागि हो। उच्च सुरक्षा को डिग्री सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छनौट गर्दा, जकडन luminaire हुनेछ।
भइरहेको IP65 सुरक्षा एलईडी दीपक सजिलै कुनै पनि वातावरण मा स्थापित गर्न सकिन्छ। यसलाई धूलो, चिस्यान, माटो र particulates देखि प्रकाश उपकरण सुरक्षा मा उत्कृष्ट छ जो एक टिकाऊ र बलियो शरीर संग सुसज्जित छ। यांत्रिक क्षति कुनै भयानक बत्ती जस्ता।
यसबाहेक, सुरक्षा IP65 luminaire ठूलो तापमान परिवर्तन withstanding सक्षम एलईडी। उहाँले कुनै पनि रूसी जाडोयाम वा तातो गर्मी दिन डराएका थियो। एकदम अक्सर, यी रोशनी जहाँ औद्योगिक मिसिन काम कार्यशालाओं, स्थापित छन्। कम्पन प्रभाव पनि सुरक्षाको यस्तो उपाय संग दीपक कुनै प्रभाव छ।
प्रकाश पर्खाल सुरक्षाको उच्च प्रकार संग एलईडी - मात्र छ luminaire काममा टिकाउ र भरपर्दो, तर पनि लागत-प्रभावकारी र ऊर्जा-कुशल प्रकाश स्रोत। यस्तो उपकरणहरू को स्थापना एकदम उपयोगिता बिल को भुक्तानी मा बचत गर्न सक्नुहुन्छ। विशेषज्ञहरु को अनुसार, नेतृत्व प्रकाश को प्रयोग तपाईंले एकदम ऊर्जा लागत कम गर्न अनुमति दिन्छ। यसबाहेक, तिनीहरूले payback को एक उच्च डिग्री छ।
सुरक्षा IP65 नेतृत्व luminaire भएको आर्थिक प्रयोग बाहेक पनि महत्वपूर्ण लाभ को एक नम्बर को मालिक हो। यी हल्का स्रोतहरू सुरक्षित धेरै घण्टा सजिलै सञ्चालन गर्न सक्षम छन्। साथै, तिनीहरूले त्यहाँ, कुनै झिलमिलाना छ किनभने चमकता र pulsing रङमा पिल पिल, स्वास्थ्य को लागि पूर्ण सुरक्षित छन्। यस्तो उपकरणहरू गरम छैनन्, र Drywall र पीवीसी सहित कुनै पनि सतह, गर्न माउन्ट गर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
IP65 महत्वपूर्ण फाइदा burnout को अभाव छ luminaires। तसर्थ, अझ ठूलो दक्षता, किनभने बत्ती को repairman परिवर्तन गर्ने वा कल धेरै दुर्लभ हुनेछ। तिनीहरूले आराम गर्दै छन् र तत्काल ठूलो क्षेत्र प्रकाश प्रदान गर्न सक्छन्। केही प्रकार औद्योगिक दीपक सल्काउनुभयो एउटा निश्चित समय चाहिन्छ। एलईडी प्रकाश आवश्यक छैन। तिनीहरूले तुरुन्तै प्रकाश को एक उज्ज्वल बीम दिनुहोस्।
औद्योगिक, घरेलू र सडक प्रकाश IP65 नेतृत्व पनि चरम अवस्थामा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। रेकर्ड उच्च (कम) तापमान, दबाव उतार चढाव, उच्च आर्द्रता को डर छैन। तिनीहरू असल आगो प्रतिरोध छ। कष्ट-मुक्त सञ्चालन धूल र ओसिलो अवस्थामा प्रत्याभूति गरिएको छ। यी रोशनी ग्रिडको कुनै प्रतिक्रिया र भोल्टेज उतार चढाव vykazhut छैन।
यसलाई सकारात्मक गुणहरू यस सेट मात्र सुरक्षा IP65 डिग्री उपकरणहरू द्वारा नजिकै कि सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। प्रकाश सुरक्षा को तल्लो डिग्री संग एलईडी पर्खाल छैन बलियो कम्पन issuing, मशीनरी संग धूल भंडारगृहों वा कारखानों मा लागू गर्न सकिन्छ।
पसलहरुमा आज IP65 नेतृत्व प्रकाश को एक किसिम प्रस्तुत। मूल्य प्रकार, आकार, आकार र अन्य मापदण्डहरू निर्भर हुनेछ। उदाहरणका लागि, सुरक्षा को IP65 डिग्री संग एउटा सानो राउन्ड सडक बत्ती 250-390 rubles खर्च हुनेछ। आकार मा ठूलो - 450 गर्न 900 rubles देखि। Bulkhead आयताकार वा वर्ग 1150 rubles र माथि खर्च हुनेछ।
निस्सन्देह, एक धातु थप टिकाउ आवास संग बत्ती परिमाण प्लास्टिक को उपकरण भन्दा बढी महंगा को आदेश खर्च हुनेछ। मूल्य बिक्री को बिन्दु निर्भर हुनेछ। उदाहरणका लागि, अनलाइन स्टोर मा मूल्य कम हुनेछ। थोक आदेश पार्टी पनि एलईडी रोशनी को खरिदका लागि लागत कम गर्नेछ। विकल्प धेरै सुरक्षित र तिनीहरूलाई गाह्रो, मुख्य कुरा हो - यो सही विकल्प आफू र विचारशील प्रकाश छ।
कार गर्न एम्पलीफायर कसरी जडान गर्न? को एम्पलीफायर गर्न subwoofer कसरी जडान गर्न? कसरी रेडियो एक एम्पलीफायर जडान गर्न
रेडियो MegaJet MJ-600 प्लस टर्बो को अवलोकन: वर्णन, विनिर्देशों र समीक्षा
फ्रिज सेट: नियम र सुझावहरू। नयाँ फ्रिज: संचालन निर्देश
कसरी पूल, सल्लाह र समीक्षा मा पौडी खेल्न हेडफोन चयन गर्न। संगीत संग पौडी खेल्न
डेनिस Kokarev - विश्व च्याम्पियन
व्लादिमीर Levkina रोग। जीवनी र समूह "ना-ना" को पूर्व-गायक को व्यक्तिगत जीवन
शब्द "युद्ध" कम्प्युटर गेम मा
एक औंला चूसने देखि एक बच्चा कसरि कुपोषण: उपयोगी सल्लाह
Gastritis: को लक्षण अचानक छ, र उपचार - एक जीवनकालमा को
स्याउ बिरुवा: विशेषताहरु चयन